Yakanakisa Nguva Ku - Kutsvaga yakanakisa nguva yekugadzira chero chinhu
Nguva Yakanakisa Ku
Nguva yakanakisa yekushanyira Ecuador
August 27, 2021 February 23, 2021 by Mumwe Mufambi
Unoda kuenda kune yakasarudzika zvipo, nzvimbo yakanaka ine zvinoshamisa zvibereko uye zvisingaite zvekushanya zvinokwezva, saka iwe unofanirwa kushanyira Ecuador neako epedyo pane yako inotevera zororo rwendo. Iwe unenge uine nguva inoshamisa zvinoshamisa ipapo. Muchikamu chino, tichakurukura kuti nei Ecuador iri nzvimbo yakanaka kwazvo kune vashanyi uye iyo… Read more
Categories Ekwadho, famba Leave mhinduro
Nguva yakanakisa yekushanyira California
August 27, 2021 February 20, 2021 by Mumwe Mufambi
Kana iwe uri kufunga nezvekushanyira nzvimbo yakanaka yekufamba ichikwira pamwe neakasiyana ekushanya ekushanya uye showbiz stardom, ipapo California ndiyo nzvimbo yaunoda kuenda. Chichava chiitiko chakanakisa, uye uchave uine nguva yakabatikana uchinakidzwa iwe neshamwari dzako uye nemhuri. Unogona kunge uchinetseka, nei California yakadaro… Read more
Categories famba, nyika dzakabatana Leave mhinduro
Nguva yakanakisa yekushanyira Hong Kong
August 27, 2021 February 18, 2021 by Mumwe Mufambi
Kana iwe uri kutsvaga kushanyira yakanaka, yakasarudzika, uye inoshanya guta rine hushamwari pazororo rako rinotevera, saka kushanyira guta reHong Kong chichava chisarudzo chinoshamisa cheshamwari dzako nemhuri. Iyo ine zvisingaite zvinoshamisira uye zviitiko zvekupa izvo zvinokuchengetedza iwe kubatikana uye kufara mukati mekugara kwako. Sei ichi… Read more
Categories China, famba Leave mhinduro
Nguva yakanakisa yekushanyira Colombia
August 27, 2021 February 16, 2021 by Mumwe Mufambi
Kana iwe uri kutsvaga kushanyira yakasununguka ine chipo chevashanyi kuenda nekwausingadye chikafu uye zvinoshamisa vanhu pazororo rako rinotevera, ipapo Colombia isarudzo yakanakisa yekushanya kwako. Kubva pane zvakawanda zvinokwezva uye nzvimbo kuti uone uye chikafu chinonaka uye inoshamisa nzvimbo dzezvakaitika, nyika iri kuzokuchengetedza iwe wakabatikana. Unokwanisa … Read more
Categories Korombiya, famba Leave mhinduro
Nguva yakanakisa yekushanyira Miami
August 27, 2021 February 13, 2021 by Mumwe Mufambi
Kunyangwe iwe uchitsvaga inoshamisa yekushanya-inodziya mamiriro ekunze, mahombekombe akanaka, inonakidza tsika, kana inoshamisa husiku husiku, nzvimbo yakanakira iwe yekushanyira hakuna mumwe kunze kweMiami. Iwe unogona kunge uchinetseka, nei Miami iri inoshamisa nzvimbo yekushanya? Zvakanaka, ndizvo chaizvo zvatiri pano kuti ndikuudze. Muchikamu chino, tichaenda ku… Read more
Nguva yakanakisa yekushanyira Tahiti
August 27, 2021 February 11, 2021 by Mumwe Mufambi
Paunenge uri mumafaro ekuva nezororo rakadzikama uye rakanakisa neshamwari dzako nemhuri kumahombekombe akanaka pamahombekombe egungwa rakadzika rebhuruu rePacific, Tahiti ndiyo nzvimbo yakanakisa yekuenda kwauri. Iwe unogona kunge uchinetseka, nei Tahiti iri nzvimbo yakakura yekushanya? Zvakanaka, ndizvo chaizvo… Read more
Categories French Polynesia, famba Leave mhinduro
peji1 peji2 ... peji10 Next →
© 2021 Yakanyanya Nguva Ku • Yakavakwa ne GeneratePress